कोठामा श्री कृष्णको तस्विर सजाउन दिने सँग मात्रै विवाह गर्छुः श्वेता खड्का – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/कोठामा श्री कृष्णको तस्विर सजाउन दिने सँग मात्रै विवाह गर्छुः श्वेता खड्का
अभिनेत्री श्वेता खड्काले श्री कृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला बाट नेपाली फि`ल्ममा डे`ब्यु गरिन् । श्री कृष्ण कै अर्को फिल्म ‘कोहिनुर’ खेलेपछि उनीहरूले बिहे गरे । तर, विवाहको एक महिनामा नै श्रीकृष्णको नि`धन भयो । त्यस पछि विक्षिप्त बनेकी श्वेता अहिले नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन् । उनी ‘श्वेता श्री फाउन्डे`सन मार्फत माझी बस्ती निर्माण पनि गरिरहेकी छिन् ।
तपाईंसँग अझै लामो जीवन बाँकी छ । अबको यात्रा कसरी गर्नुहुन्छ ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
म आजका लागि बाँ`च्छु । आज जसरी पनि खुसी हुने प्रयत्न गर्छु । भोलि के हुन्छ, सोच्दै सोच्दिनँ । अरूले के भन्छ, सोच्छ पनि ख्याल गर्दिनँ । उहाँ (श्री कृष्ण श्रेष्ठ)ले मलाई यसरी अधुरो बाटोमा छाडेर जानु हुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? श्री कृष्ण श्रेष्ठ सँग विवाह हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन नि । एक महि`नामा फिक्स भएर विवाह भयो । इन्टर`कास्ट, उमेरको ग्याप लगायत हरेक कुराले हाम्रो विवाह नहुनु पथ्र्यो । तर, भयो । भोलिको कुरा कसलाई के थाहा ?
पहिलाको श्वेता त उहाँले छाडेर गएको दिन नै जलेर मरिसकी । म अर्को श्वेता जन्मेकी हो । अहिले नयाँ जे पनि सोच्न सक्छु । मेरो जीवनमा जे पनि हुन सक्छ । पहिलाको जिन्दगीको त्यो गाडी, त्यो लुकिङ मिरर हेर्न छाडिसकेँ, जुन बाटोमा मेरा पछा`डिका घ`टना देखिन्छन् । त्यही भएर म फ्रेस श्वेता हो । मैले फिल्म पनि बनाएँ र दर्शकको मन जितेँ । बस्ती पनि बनाउँदै छु । जे गर्दै छु, नयाँ गर्दै छु ।
यदि भोलि विवाह भइहाल्यो भने श्री कृष्ण श्रेष्ठलाई बिर्सनुहुन्छ ?
यदि मेरो विवाह भइहाल्यो भने उहाँलाई राख्ने स्पेस सिर्जना गर्न नसक्ने सँग हुँदैन । मेरो नयाँ घरमा पनि उहाँको तस्बिर राख्न पाउनुपर्छ । उहाँको जन्मदिन हरेक वर्ष सेलिब्रेट गर्न छुट दिने मान्छे आए विवाह गर्छु । उहाँ मेरो विगत हो ।
मेरो विगतलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मान्छेसँग विवाह हुँदैन । मेरो प्रत्येक पलमा उहाँबारे बोल्दा तारिफ गर्ने मान्छे सँग हुनुपर्छ । धनले, रूपले मलाई अर्थ राख्दैन । मन राम्रो भएको मान्छेसँग अवश्य जोडिन सक्छु । -नयाँ पत्रिका बाट
छोरालाई क’लेजो दिएर ब’चाउने बाबुलाई पर्यो यस्तो आ’पत, अभाबले श्रीमती र छोरा भारतमा अ’लपत्र(भिडियो)